ओठ फुट्यो ? अब यसरी गर्नुस् सुरक्षा ! – rastriyakhabar.com
ओठ फुट्यो ? अब यसरी गर्नुस् सुरक्षा !
फुटेको ओठलाई केयर गर्नका लागि मह र कागतीको केही थोपा मिसाएर नियमित रूपमा ओठमा लगाउनुपर्छ । यसबाट ओठको रंग सुन्दर र ओठ कोमल हुन्छ । धूमपानले ओठ कालो र सुख्खा हुने गर्छ । ओठको रंग गुलाफी हुनुपर्छ । यसका लागि धूमपान छोड्नुपर्छ । ओठमा ओलिभ ओयल, तोरीको तेल वा ल्वाङको तेल पनि लगाउन सकिन्छ । यसबाट ओठ कोमल, नरम र चम्किलो बन्छ ।
ओठलाई सुख्खा र कालो हुनबाट जोगाउन बाम वा जेल प्रयोग गर्नुपर्छ जसले सूर्यबाट आउने अल्ट्राभ्वाइलेट रेज ९परावैजनी किरण० बाट सुरक्षा दिन्छ । जाडोमा हामीले धेरै मात्रामा मोस्चराइजर भएको लिपस्टिक किन्दा राम्रो हुन्छ । सुत्नुअगाडि लिपिस्टिक हटाएपछि राम्रो खालको मोस्चराइजिङ लिप बाम लगाउनुपर्छ ।
सूर्यको युभी किरणको सम्पर्कमा आउँदा ओठको रंग धमिलो हुन्छ । यस्तोमा छालालाई पनि युभी किरणबाट सुरक्षित राख्नुपर्छ । ओठलाई कालो हुनबाट जोगाउन हामीले कागती पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ । कागतीमा प्राकृतिक ब्लिच हुन्छ । यसले ओठको दाग–धब्बा सहज रूपमा हटाउन सहयोग गर्छ । यसले ओठलाई गुलाबी रंग दिलाउँछ भने शीतल राख्ने र मोस्चराइज पनि गर्छ । गुलाबजलका केही थोपा महमा मिसाएर ओठमा लगाउन सकिन्छ । ओठलाई प्राकृतिक रूपबाट गुलाबी बनाउनका लागि अनारको रसमा पनि लगाउन सकिन्छ । अनारको रसमा पानी र क्रिम पनि मिसाउन सकिन्छ । आफ्नो ओठलाई पोषण दिन र नरम राख्न ओलिभ ओयल मसाज गर्न सकिन्छ ।